ओलीको आनाकानी : न लिम्पियाधुरा, न बीआरआई | Nepal Khabar
केपी ओलीले बारम्बार पार्टीले सरकारलाई सहयोग गरेन भने पनि तथ्यले त्यसो भन्दैन। हो, ओलीजीका केही कामहरु विरोध गरेरै रोकिएको हो। जनताको भावनाविपरीत गुठी विधेयक ल्याउँदा काठमाडौँ उपत्यकाका सांसदहरुको नेतृत्व गर्दै बालुवाटार पुगेर माधव नेपालले नै भन्नुभएको थियो, ‘यो विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिनूस्, हामी मान्दैनौँ।’ उहाँले सञ्चारमाध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आमसञ्चार विधेयक अघि बढाउँदा त्यसलाई पनि रोकिएकै हो। बद्नाम व्यक्तिहरुलाई रोजी–रोजी सरकारी नियुक्ति दिँदा पार्टीमा प्रश्न उठाइएकै हो। कोभिडको निःशुल्क उपचार गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले निर्णय गर्दा त्यसको विरोध गरिएकै हो। कोभिड महामारीसँग लड्ने बेलामा पनि भ्रष्टाचारलाई केन्द्रमा राखेर रचित ओम्नी प्रकरणको विरोध गरिएकै हो। अब भन्नूस्– यसो गरेर के गलत गरिएको हो? यो कुनै अर्घेल्याइँ हो?
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको श्रेय एकल रुपमा आफूले मात्र लिन केपी ओलीले खुबै प्रयत्न गरिरहनुभएको छ। तर, सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो विषय नै थिएन। २०७७ जेठ २ गते बिहान बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकबाट त्यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसलाई सरकारले अघि बढायो र संसद्मा समेत राष्ट्रिय सहमति भएर सर्वसम्मत रुपमा पारित गरियो। बरु, मुलुकको संविधानमा स्थापित भूभागमाथि भौतिक रुपमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गराउन केपी ओलीले आनाकानी गरिरहनुभएको छ। यसबीचमा छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न अधिकारीहरुसँग कुराकानीहरु भएका समाचारहरु सुनिन्छ। तर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा एकपटक पनि कुराकानी भएको सुनिएको छैन। न प्रधानमन्त्री तहमा कुरा हुन्छ, न परराष्ट्रमन्त्री तहमा कुराकानी हुन्छ न परराष्ट्र सचिव तहमा नै कुराकानी हुन्छ। वार्ताको टेबुलमा नबसी र आफ्ना तथ्य–प्रमाणहरु पेसै नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने थाहा भएर आन्तरिक रुपमा भाषणको विषय बनाउने तर कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा कुरै नउठाउने नीति लिनु विडम्बनापूर्ण छ।
हामीले नीतिगत विषयमा पार्टीमा छलफल होस् भन्ने चाहेका थियौँ, अरु विषयमा होइन। किनभने, हामी जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। सरकारले गरेका कामहरुको जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्छ र सबै नेताहरुको टाउकोमा दोष आउँछ। त्यसैले सरकारको नीति–कार्यकक्रम कस्तो बनाउने, बजेट कस्तो बनाउने, सरकारले विभिन्न नीतिहरु तय गर्दा त्यसमा पार्टीको दृष्टिकोण कसरी अभिव्यक्त गराउने भन्ने जस्ता कुरामा कहिल्यै छलफल भएन। फलस्वरुप, पार्टी नीति र चुनावी घोषणापत्र एकातिर, सरकारका कामहरु अर्कातिर हुँदै जाँदा असन्तुलन उत्पन्न भएको कुरालाई कहिल्यै महसुस गरिएन। यतिसम्मकि, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज मानिने परराष्ट्र र रक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा पाटीभित्रसमेत एकपटक छलफल गरिएन। अझ उल्टै पार्टीले सहयोग गरेन भनेको सुन्नुपर्दा आश्चर्य लाग्छ।
७० बर्ष लामो राजनीतिक अस्थिरताको अनुभवबाट पाठ सिकेर यो व्यवस्था गरिएको हो। यदि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर संविधानको अपव्याख्या गरियो भने हरेक प्रतिनिधिसभाले अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ छ र मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरताको जाँतोमा पिसिनेछ। तीन बर्ष त के, आफूलाई चुनौती ठान्नेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीले तीन दिन वा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ। यस्तो गलत नजीर नबसोस् र हुकुम वा सनकका भरमा संविधान संशोधन नहोस् भनेरै हामीले यसको विरोध गरेका छौँ र आन्दोलन अघि बढाएका छौँ। अदालतमा बहसका क्रममा संविधानको कुनै धारामा त छैन तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने हास्यास्पद तर्कहरु आइरहेका छन्। हिजो राजा–महाराजाहरुले पनि गर्न नसकेको, गरेर अदालतबाट खारेज भएका अधिकारहरु आफूमा छन् भन्ने कसैले भ्रम नराखे हुन्छ।
प्रकाशित: February 12, 2021 | 09:30:22 माघ ३०, २०७७, शुक्रबार